ဝူတန်းတောင် , Wudang Mountain | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ၀ူတန်းတောင် , Wudang Mountain
Posted by weiwei on Nov 20, 2010 in Photography, Travel | 11 comments
Wudang Mountain ၀ူတန်းတောင်
၀ူတန်းတောင်ကို ရောက်ဖြစ်ပုံကတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ … 2008 အောက်တိုဘာလမှာ တရုတ်ပြည်မှာ နိုင်ငံတကာ ၀ူရှု ပွဲတော်ကျင်းပပါတယ် … နေရာကတော့ ဟူးပေပြည်နယ် ရှီရန့်မြို့က ၀ူတန်းတောင်ခြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ၀ူရှုပညာရှင်တွေလာရောက် ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်လို့ ဘာသာပြန်လုပ်ဖို့ တရုတ်ကျောင်းသားတွေကို စုဆောင်းပါတယ် … ရှားရှားပါးပါးပဲ ဆိုရမှာပေါ့ ဗမာစကားသင်ယူနေတဲ့ တရုတ်ကျောင်းသား ရှာမရဖြစ်တာနဲ့ ကျွန်မကို ဘာသာပြန်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးပေမယ့် စရိတ်ငြိမ်း တာဝန်ယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၉ ရက် အဲဒီမြို့မှာ သွားနေရပါတယ်။
ကျွန်မဘ၀မှာတော့ အမှတ်တရတစ်ခုပါပဲ … မြန်မာဆိုပြီး ဂုဏ်တက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့ … မြန်မာ ၀ူရှူးက ပြိုင်ပွဲဝင် ၄ ယောက်ဝင်ပြိုင်ပါတယ် … ပထမ ဒုတိယဆုတွေ ရကြလို့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူစရာကောင်းခဲ့ပါတယ် … ကျွန်မက ဘာသာပြန်လုပ်ဖို့ လိုက်သွားပေမယ့် ဗမာဝူရှူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ကျွန်မထက်တောင် တရုတ်စကား ပြောတတ်နေလို့ အလုပ်မလုပ်ရပဲ ဧည့်သည်အဖြစ် ပြိုင်ပွဲတွေကြည့်ရတယ် … တရုတ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ အနီးကပ်နေရလို့ သူတို့ဓလေ့စရိုက်တွေကိုလဲ ပိုသိခဲ့ရပါတယ် ..
၀ူတန်းတောင်ကတော့ (taoist) တာအိုဘာသာရေး သင်တန်းတွေ၊ သုတေသနတွေ၊ တရားအားထုတ်မှုတွေ၊ သိုင်းလေ့ကျင့်မှုတွေ၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာတွေ လေ့လာသင်ယူဆည်းပူးတဲ့ နေရာအဖြစ် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကထဲက ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ (၂၅-၂၂၀) ဟန်မင်းဆက်လက်ထက်ကထဲက ဘုရင်ရဲ့ အလေးထားခံရတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ တန်မင်းဆက် အေဒီ (618-907)မှာ နဂါး ၅ ကောင်ဘုရားကျောင်း ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ထိပ်ပိုင်းက ပုပ္ပါးတောင်လိုပါပဲ … ဘုရားကျောင်းအဆောက်အဦးလက်ရာတွေကတော့ ရှေးလက်ရာအတိုင်း ယခုအထိ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီကိုရောက်တုန်းက လူတွေကအရမ်းများနေတာနဲ့ ဓါတ်ပုံသေချာမရိုက်ခဲ့နိုင်လို့ တချို့ပုံတွေကို စာအုပ်ထဲကနေပဲ ပြန်ရိုက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တောင်မကြီးအပြင် တောင်တန်းတွေ အများကြီးနဲ့ အင်မတန် သာယာလှပပါတယ်။ သိုင်းကျင့်နေတဲ့ သိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့ ၀ူတန်းဂိုဏ်းချုပ်ကြီးတစ်ယောက် အခုထိ ရှိပါတယ်။
တာအိုဘာသာအကြောင်း အနဲငယ်ရှင်းပြချင်ပေမယ့် သိပ်ရှည်သွားမှာမို့ အချိန်ရမှ သီးသန့်ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြတော့မယ် …
ဒီပို့စ်အတွက်က ရေးချင်တာလဲများ ပြချင်တဲ့ပုံကလဲများတာနဲ့ တော်တော်နဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး … အခုတော့ ရေးချင်တာလျော့ ပြချင်တာလျော့ပြီး တင်လိုက်တော့တယ် …
ဝူတန်းဂိုဏ်းရဲက ပထမဆုံးဂိုဏ်းချုပ်ကြီး အမည်ကား ဝူကျိဖြစ်၏။ သူသည် ယခင်ကရှောင်လင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသာငယ်တဦးဖြစ်ပြီး ရှောင်လင်ဂိုဏ်း၏ အထွတ်အမြတ်ဆုံး သိုင်းကျမ်းအရှုပ်အထွေးကြောင့် ဂိုဏ်းမှထွက်ခွာလာပြီး သိုင်းလောကတွင် ကျင်လည်ကျက်စားကာ နောက်ဆုံးတွင် သိုင်းလောကသားတိုင်း မက်မောသည့် နဂါးနိုင်ဓါးကို ရရှိပြီး ဝူတန်းတောင်တွင် ရှောင်လင်ကျောင်းတော်နှင့်အပြိုင် ဝူတန်းဂိုဏ်းကြီးကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့လေသည်။ သူ၏ငယ်စဉ်ဘဝ မ်ိန်းခလေးသူငယ်ချင်းကား သိုင်းလောက ဂိုဏ်းကြီးခုနှစ်ဂိုဏ်းတွင် တဂိုဏ်းအပါအဝင်ဖြစ်သည် အော့မေရသေ့မဂိုဏ်း၏ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ဖြစ်လာလေတော့သတည်း။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကိုယ်လုံပညာ၊ လက်နက်မဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးပညာတို့တွင် ကွန်ဖူးသိုင်းပညာသည် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းပညာရပ်သည် ဝူရှုးသိုင်းကျင့်စဉ်မှ ဆင့်ပွားထွက် လာခဲ့သည်။ ထိုသိုင်းဘိုးအေကြီး ဝူရှုး၏ မူလမြစ်ဖျားခံရာကား မြန်မာတို့၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဖွယ်ရာ ရိုးရာအမွေအနှစ် မြန်မာ့သိုင်းပေတည်း။ မယုံလျင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးကောင်စီ မြန်မာ့သမိုင်းပြုစုရေးကော်မရှင်မှ ထုတ်ဝေသော မျိုးချစ်စိတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး ရှေးခေတ်မြန်မာ့သမိုင်းစာအုပ် အမှတ်စဉ်ဘဲဥကို ရှာဖွေဖတ်ရှုရန် တိုက်တွန်ပါ၏။
kai ကို producer လုပ်ခိုင်းပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ပါလား … မြန်မာ့သိုင်းကို ကမ္ဘာသိအောင် …
ကိုကြောင်ကြီးက ဇာတ်ညွှန်းလဲရေး ဒါရိုက်တာလဲ လုပ်ပေါ့ ..
ပြောလို့သာ ပြောတာ.. သိုင်းပြပွဲ တခု တွေ့ခဲ့တယ်.. ပုံစံကတော့ ရှောင်လင် သိုင်းက လူတွေ လိုဘဲ.. ဂတုံးနဲ့.. မှတ်မှတ်ရရ သိုင်းပြပွဲမှာ အစွမ်းပြတဲ့ ဟာကို ကင်မရာနဲ့ မရိုက်ရတာကို ခိုးပြီး တိတ်တိတ်လေး ရိုက်ပြီး အသိတွေ ပြန်ပြတော့.. ကြည့်နေတဲ့ လူတွေက.. တခြား အကွက်ကိုတော့ သူတို့ သဘောကျလို့ ကြည့်ယုံဘဲ ကြည့်တယ်.. အဲဒီ အကွက်ကျတော့ အာ့းးး ဆိုပြီး ထအော်တယ်.. သူတို့ဘဲ နာသွားတဲ့ ပုံစံနဲ့ အော်နေကြတာ.. ဘယ်လို လုပ်ပြလဲ ဆိုတော့… ကင်းမြီးကောက်ထောင်လျက်အနေအထား.. ခေါင်းနဲ့ ကြမ်းပြင်ကို ထောက်ပြီး လက်ကလည်း ပိုက်ထားသေးတယ်.. ခြေထောက်ကိုတော့ အတည့်အတိုင်း မထောင်ထားဘဲ.. Y ပုံစံ ထောင်ထားတယ်.. ပြီးတော့ အစွမ်းမပြခင် သူသုံးမဲ့ ၀ါးရင်းဒုတ်ကို ပရိတ်သတ် တွေကို ပြဖို့ စင်အောက်ကို ဆင်းလာပြီး ၀ါးရင်းဒုတ် အစိမ်းကြီးကို လူတွေကို လိုက်ပြတယ်.. ဆူး အရှေ့မှာလည်း လာပြတယ်။ ကိုင်တော့ မကြည့်ဘူး.. အဖွဲ့ထဲက တခြား ပရိတ်သတ်တွေကတော့ ကိုင်ကြည့်ကြတယ်။ နောက် လူတွေကို လှည့်ပတ်ပြပြီး.. အပေါ်တက်သွားပြီး Y ပုံစံ နေနေတဲ့ ကတုံးသိုင်းသမားကို.. ၀ါးရင်းဒုတ်နဲ့ Y ရဲ့ အလယ် တည့်တည့် ကို ဒုတ်ခနဲ ရိုက်ချလိုက်တယ်။ ၀ါးရင်းဒုတ်ကတော့ ကျိုးသွားရှာတယ်။ သူတို့ကတော့ ခပ်တည်တည်ဘဲ.. ပြန်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လို့ အလေးပြုပြီး ပြန်ဝင်သွားတယ်။
ပြောသာ ပြောရတယ်.. မြန်မာ့ သိုင်း စွမ်းရည် ပြပွဲတွေမှာလည်း လှံတွေ ဓါးတွေ အသားထိုးလို့ မပေါက်တာနဲ့ ချိုးပြတာတွေ ဓါတ်ပုံတွေမှာ မြင်မိတယ်။
ထင်တာတော့ သမာဓိ စွမ်းအင်ထူထောင်ပြီး.. စိတ်နဲ့ ထိန်းချုပ်သွားတာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။
စိတ်ရဲ့ စူးစိုက်အားနဲ့.. မာကျောတဲ့ သံကြိုးကြီးတွေ ကို.. အပ်ချည်ကြိုးလေးလို့ စိတ်သွင်းပြီး ဖြတ်ပြတာ မျိုးလို့ တော့ မှတ်သားဘူးတယ်။
အဲဒီ သမာဓိ အားရဖို့တော့ တော်တော် အားထုတ်ရမယ်။ ကြိုးတမ်းပေါ် အိပ်နိင်အောင် ၁၃နှစ်ကျင့်ရတယ်လို့.. ဆူး အရင်က တင်ဘူးတဲ့ ပိုစ်တခုမှာ ပါတယ်။
ရေကူးတတ်တိုင်း ချန်ပီယံ မဖြစ်နိုင်တော့ ချန်ပီယံ ဖြစ်အောင်တော့ လေ့ကျင့် အားထုတ်မှု အများကြီး လုပ်မှ ရမယ် အဲဒီလို ထင်ပါရဲ့။
သိုင်းလောကသားတွေကို မေးကြည့်မှပဲ သေချာသိရလိမ့်မယ် … ရှောင်လင်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ … ၀ူတန်းကတော့ တာအိုဘာသာ … ပုံစံကြည့်ရတာလဲ ရှောင်လင်က အမာသိုင်း .. ၀ူတန်းကအပျော့သိုင်း … ထိုက်ကျိချွမ်က ၀ူတန်းသိုင်းတစ်မျိုးပဲ … တရုတ်တွေကတော့ ကျန်းမာရေးလိုက်စားတော့ ထိုက်ကျိချွမ်ကို တော်တော်လေ့ကျင့်ကြတယ် …
ပုဂံခေတ်က အရည်းကြီးတွေဟာ .. ရှောင်လင်ဂိုဏ်းက ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ တူပုံရတယ်..။
ပုဂံခေတ်ဦးက … ကျားကြီး..၀က်ကြီး..ရှုးပျံကြီးတွေဟာ .. တရုတ်ပြည်က အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ သမိုင်းနောက်ကျပေမဲ့… ဆင်တူနေတယ်လို့ ..ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောဖူးတာကိုးကားရရင်.. အရည်းကြီးတွေရဲ့.. ပွဲကျောင်းသိုင်းပညာဟာ .. ရှောင်လင်က သိုင်းပညာနဲ့ဆင်တူနိုင်တယ်..။
အနော်ရထာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့တာ … အရည်းကြီးလူဝတ်လဲစစ်တပ်ကို အဓိကထားခဲ့ဟန်ရှိတော့ … ရှောင်လင်သိုင်းပညာနဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတည်ခဲ့တာလို့ … ခန့်မှန်းရင် မှားမယ်မထင်.။
(အခုလည်း .. တရုတ်လက်နက်တွေနဲ့.. စတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်နေတာ ထင်ရတာပဲနော…)
( ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်သူတွေ မျက်လုံးကျယ်လာအောင် ..အစလေးဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါကြောငိး…)
တောင်ထိပ်က ရွှေ ခရမ်းရောင် ဘုရားကျောင်း က နေ စ ပြီး အောက် က ပုံ တွေ အ ကုန် ကြိုက် တယ် …. အ ပေါ် က ပုံ တွေ က တော. ကျွန် တော် တို. တောင် ကြီး လောက် တောင် မ ကောင်း ၀ူး ဟီး ဟီး …….